Hupfumi hwenyika huri kuramba huchiparara vazhinji vachiti hapana matanho ari kutorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi.
Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika munyika munyaya dzezvehupfumi, sezvo zvinhu zvese zvangoita manyama amire nerongo. Vamwe ndivo vanoti zvinhu zvaremera kumusoro setsvimbo.
Mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva, inflation ichiitawo chamurambamhuru pasina ari kukwanisa kuipingudza.
Mapoka anokosha munyika anoti rezvehutano, neredzidzo, anonzi haasi kufamba zvakanaka, sezvo vashandi vari kuramwa mabasa vachida kuti hurumende itarisise zvakare mihoro yavo, iyo vanoti yasara pasi zvakanyanya zvichienzaniswa nekukwira kwemitengo yezvinhu.
Izvi zvinonzi ndizvo zviri kuitikawo kuvashandi vemumakambani akazvimirira, avo vanotiwo vari kuda kutambiriswa mihoron nemari yekunze, asi vasiri kubhadharwa sezvo makambani akawanda asina chaari kuburitsa nekuda kwekushaikwa kwemari yekunze inodiwa kuti vagadzire zvitengeswa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi, VaLuxon Zembe, vanoti nekuda kwekuti makambani haasi kushanda zvakanaka, haakwanise kuwedzera vashandi wawo mihoro kuti ifambirane nekukwira kwezvinhu.
Mashoko aVaZembe aya anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Doctor Prosper Chitambara, avo vanoti mitengo yezvinhu iri kungoshandurwa zuva nezuva muzvitoro, izvo zviri kuomesera vatengi.
Doctor Chitambara vanoti mucherechedzo mukuru wekuti hupfumi hwenyika hahuchina kugadzikana zvakanaka kukwira kwe inflation, iyo yadongorera kuda kupinda muzvikamu zana kubva muzana.
Zimstats yakazivisa neMuvhuro kuti inflation yepagore mumwedzi waChivabvu yakakwira kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine zviga zvisere kubva muzana.
Ukuwo, varairidzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatangawo kuramwa mabasa vachida kuti hurumende avatambirise mihoro yavo nemari yekuAmerica.
Vashandi ava vanoti mudzimba dzavanogara, vamwe vavo vave kunzi vabhadhare rendi nemari yekunze iyi.
Vashandi vezvehutano, vari pasi pesangano reHealth Apex, vakatangawo kuramwa mabasa vachingoshanda mazuva maviri chete svondo rino, kukundikana kwehurumende kugadzirisa zvichemo zvavo, vobva vamira keunda kumabasa zvachose.
Sachigaro wesangano reHealth Apex, VaPanganai Chivese vanoti chavari kungoda chete ndechekuti hurumende idzose huremu hwemari sezvayaive kare kuitira kuti vakwanise kutenga zvinobatika.
Matambudziko ose aya angagadziriswa sei? Panodiwa chii chaizvo? Nhengo yeZanu PF, uye vari mukuru wekambani yeGMRI CAPITAL, VaGilbert Muponda, vanoti chikuru chinongodiwa chete kuti upfumi hwenyika hugadzikane kudzora chivimbo muhurumende.
VaMuponda vanoti izvi zvinokwanisika kuburikidza nenhaurirano dzinopindwa nemapato ose ezvematongerwo enyika, kusanganisira Zanu PF, neMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa.
Asi kusvika izvi zvaitika, veruzhinji munyika vacharamba vachinonga svosve nemuromo, vachingokurudzirwa kuti vasunge dzisimbe asi pasina chinovasimbisawo ivo kuti vakwanise kusunga dzisimbe.